အဓမ္မသိမ်းလယ်မြေများ ဦးပိုင်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်များ ယူထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ခင်ဦးသာ| December 13, 201
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တခု။ လယ်မြေများကို သိမ်းယူကာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏ သားသမီး ဆွေမျိုးများက စီမံကိန်းမြေအဖြစ် ကုမ္ပဏီများသို့ သိန်းထောင် ချီ ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ကြသည် (ဓာတ်ပုံ – Shwe Gas Movement)
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ လယ်မြေ အဓမ္မသိမ်းယူမှုကို စစ်တပ်က အများဆုံး လုပ်ထားကြောင်း၊ သိမ်းထား သည့် လယ်မြေများကိုလည်း သိမ်းယူသည့် စစ်တပ်အတွက် အသုံးမပြုဘဲ စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမီ တက် အမည်ပေါက်၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ် ဆွေမျိုးများ၏ အမည်ပေါက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ထား သည်ကို တွေ့ ရကြောင်း စုံးစမ်းရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
“စစ်တပ်ပိုင်မြေဆိုပြီး အဓမ္မ သိမ်းထားတာတွေ မြို့နယ်အများစုမှာ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်တပ် က အသုံးပြုနေတာ မတွေ့ရဘဲ ဦးပိုင် အမည်ဖောက်ပေးထားတာ၊ စီးပွားရေးသမားတွေ ကို ငှားစားထားတွေကို တွေ့ရတယ်” ဟု လယ်ယာမြေ သိမ်းယူမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မ ရှင်အဖွဲ့ဝင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ပြီး စစ်တပ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးရွှေ ဦးဆောင်သော လယ်ယာမြေ သိမ်းယူမှု စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်မှ စတင်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လှည့်လည် စစ်ဆေးနေရာ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ၊ ဂွ၊ အမ်း၊ မင်းပြား၊ တောင်ကုတ် စသည့် မြို့နယ် များ တွင် စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အစိုးရ စစ်တပ်က အဓမ္မသိမ်းယူထားသည့် လယ်ယာမြေဆိုင်ရာ အမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က စစ်ဆေးပြီးနောက် မူလပိုင်ရှင် လယ်သမား များ ပြန်လည်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အတွင်းရှိ လယ်မြေအများစုကို ထိုဒေသ၌ အခြေစိုက်ထားသည့် ဓည၀တီ ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများနှင့် ခြေမြန်တပ်ရင်း ၅၄၂၊ ထောက်လှမ်းရေးတပ်တို့က သိမ်းဆည်းထားကြောင်း ဦးဘရှိန်က ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၌ တည်ဆောက်နေသော ရွှေသဘာဝ ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ် လုပ်ငန်းများ၊ ဂက်စ်ပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းရာ လမ်းကြောင်းတလျှောက်ရှိ လယ်မြေများ၊ နွားစား ကျက်မြေများကို ထိုဒေသရှိ စစ်တပ်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တိုင်းမှူး တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ကြသည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏ မိသားစုပိုင်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်၍ စီမံကိန်း ကုမ္ပဏီများကို ကျပ်သိန်းပေါင်းများစွာဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ရခိုင်ဒေသ၌ တိုင်းမှူး တာဝန်ယူခဲ့ကြသော ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ၀င်းမြင့်၊ ဗိုလ်ချုပ် မောင်ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ် သောင်းအေး၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် သူရမောင်နီ၊ ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ် သိန်းဆွေ စသူတို့က သိမ်းယူ၍ ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ အမည်ဖောက်ကြောင်း၊ ထိုလယ်မြေများ သည် ရွှေဂက်စ် စီမံကိန်း ဧရိယာတွင် ပါဝင်သည့်အတွက် လျော်ကြေးငွေ ကျပ်သိန်းထောင်ချီ၍ ရရှိခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်ဖြူ အခြေစိုက် ထောက်လှမ်းရေးတပ်တခုက သိမ်းထားသည့် စေတီယျကျေးရွာ အနီးရှိ မြေကွက်နှင့် အုန်းခြံတချို့၏ ပိုင်ရှင်နာမည်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ စစ်တိုင်းမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ယခင် နအဖအစိုးရ အတွင်းရေးမှူး (၃) ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၀င်းမြင့်၏ သမီး အမည်ပေါက်နေသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်း ဦးဘရှိန်က ပြောသည်။
၎င်းက “ထောက်လှမ်းရေးတပ် ၁၀ က သိမ်းထားတာကို ဗိုလ်ချုပ် ၀င်းမြင့် သမီး နန်းရတနာဝင်း နာမည်နဲ့လုပ်ထားတာ တွေ့တယ်၊ လယ်ဧက မများပေမယ့် မတရား သိမ်းယူထား တာ တွေ့ရ တယ်။ အုန်းခင်း တချို့လည်း ပါဝင်နေတယ်။ ဒါတွေကို မူလပိုင်ရှင်ကို ပြန်ပေးသင့် တယ်။ ပြန်ပေးအောင်လည်း တိုက်တွန်းသွားမှာပါ” ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတွင် စစ်တပ်နှင့် ၎င်းတို့နှင့်နီးစပ်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက သိမ်းယူထား သည့် လယ်မြေဧက သိန်းပေါင်း များစွာရှိကြောင်း၊ ထိုကိစ္စများကို စုံစမ်းစစ်ဆေး ရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းပေး ထားကြောင်း၊ မိမိတို့ တာဝန်ယူထားရာ ဒေသများမှ စစ်ဆေးတွေရှိချက်များကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင် က ပြောသည်။
“ကျနော်တို့က စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုတွေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တင်ပြပြီး အတည်ပြုချက် ယူမယ်၊ ပြီးရင် အစိုးရရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေကို ပေးပို့မယ်။ အစိုးရဌာနတွေက ဘယ်လောက် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
This entry was posted on December 13, 2012, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
အကျဉ်းထောင်များသို့ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးကူညီရန် ICRC ပြင်ဆင် →